Motorola Otu Ike: Ihe oyiyi enyoghi inyoghi na nkọwa | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị nwere data gbasara Motorola One Power maka oge mbụ, nke yiri ka ọ bụ Motorola ekwentị mbụ jiri gam akporo Otu dị ka sistemụ arụmọrụ. Anyị enwetala data mbụ na ihe nlereanya a, nke a na-akọ na ngosi ya ga-abụ na June 6. Mana ọ dị ka ebe ahụ anaghị akwụsị n’ebe a.
N'ihi na ọ bụ izu ụka a gara aga mgbe ozi ndị ọzọ gbasara Motorola One Power abịala. Na nke a, ha rutere n'ụdị ihe oyiyi, nke anyị nwere ike ịhụ ekwentị n'eziokwu, na mgbakwunye na ụfọdụ nkọwa ọhụrụ nke ihe nlereanya ahụ. Gịnị ka anyị ga-atụ anya?
Na usoro nke nkọwa, a na-atụ anya na nke a Motorola One Power ga-enwe a ihuenyo na FullHD + mkpebi, nke ga-enwe nha 18: 9. Yabụ na akara a ga-abụrịrị eziokwu nke okpokolo agba, nke bụrụla ihe kacha bụrụ ihe nkịtị na ụwa taa.
N'ime ngwaọrụ ahụ Anyị ga-atụ anya na Qualcomm Snapdragon 636 processor, nke na-eme ka o doo anya na ọ ga-abụ ihe nlereanya nke ga-eru n'etiti etiti nke onye nrụpụta. Na nhazi ahụ, anyị ga-atụ anya na 6 GB Ram na 64 GB n'ime nchekwa.
Motorola One Power ga-enwe igwefoto azụ abụọ. Isi ihe mmetụta bụ 16 MP nwere oghere nke f / 1.8, ebe nke abụọ bụ 5 MP nwere oghere f / 2.0. Na mgbakwunye, igwefoto 16 MP nwere oghere f / 1.9 na-echere anyị n'ihu. Ma ọ bụghị ya, ngwaọrụ ahụ ga-enwe 3.780 mAh batrị, nke na-ekwe nkwa inye nnwere onwe dị ukwuu.
N'ozuzu ị nwere ike ịhụ nke ahụ Nke a Motorola Otu Ike rutere n'etiti etiti ma ọ bụ n'etiti-adịchaghị nso. Akụkụ asọmpi na ahịa. Ọ bụ ezie na ịnwe gam akporo nwere ike inyere ya aka inweta ọfụma karịa ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ọ ga-abụ na n’izu a a ga-ewepụta ya n’ihu ọha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Ihe onyonyo ohuru na nchoputa nke Motorola One Power
Samsung Galaxy S10 ga - enwe sistemụ foto igwefoto atọ